Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry : adin-jiolahim-boto | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry : adin-jiolahim-boto
Lazaina fa ny toetry ny mponina no mila fanarenana. Aiza moa no hampiety izany raha ny lehibe hitarafan’ny madinika ny fitondran-tena indray no manondrana? Dia diso ary tsy mendrika ny fomba nanalana an-dramatoa Christine Razanamahasoa avy ao amin’ny tranom-panjakana fonenany tamin’ ny naha minisitra ny tenany. Sanatria, araky ny fomba fiteny, dia toy ny raoka alika no nihatra taminy. Mety nahafa-baraka azy izany fa afa-baraka manoatra izany ireo naniraka sy nanatanteraka ny fampiharana an’io fandroahana amin’ny fomban-jiolahim-boto toy ireny. Fifampitondran-dry zareo manamboninahitra eto amin’ny tany sy fanjakana ka tsy afa-maina amin’izany ny tany sy fanjakana fa samy maimbo sy afa-baraka avokoa.
Tsy sahin’ny vahoaka angamba ny fitsarana ny adin’ny vaventy, fa samy tompon-tany eto ka zon’ny tena no maneho fahatezerana noho ny toetra tsy mendrika asehon’ny fitondrana izay mahatonga ny firenena ho voahoso-potaka. Tsy hitsara ny mikasika ny anton’io fandroahana an’i Christine Razanamahasoa io akory, iza intsony amin’ny olon-tsotra moa no tena mahafantatra ny fitsipika mifehy ny zo ananan’ ny manam-pahefana hitoetra amin’ireny fonenana ireny? Voalaza fa telo volana taorian’ny fitsaharana tamin’ny adidy nosahaniny dia tapitra ny zo amin’ireny trano ireny. Firifiry moa anefa no mandingana an’izay fe-potoana izay? Samy mibodo fotsiny am-pitoerana. Asa ny momba ny trano fonenan’ny Praiminisitra, fa misy amin’izy ireo no mandigana taona maromaro ary araky resaka mandeha aza dia misy hono iray amin’izy ireo nampiseho fahaizana manokana toy ny fanaovana mazia ka nivadika ho fananany manokana ilay tanana nivalamparany tamin’izy Praiminisitra.
Tsaho angamba izany, nefa moa amin’izao toetr’andro izay ahafahan’ny matanjaka mandidy sy manapaka arak’izay tiany izao dia tsy mahagaga raha olona tokony hanome tahaka eo amin’ny fanajan-tena sy fanajana ny fananan’ny hafa sy ny fananam-panjakana no iny indray izy fa mamalan-kira.
Amin’izao fitrangan’ny ady saritaka toy izao no andrasana hijoro ireo tompon’andraikitra momba ny fampihavanana, tsy amin’ny fitorian-teny miangavy fifandeferana fotsiny, fa amin’ny filazana fehin-kevitra entitra manameloka an’ireo jiolahy mampiseho toetram-boto, sy amin’ny fametrahana hafatra amin’ny fampitsaharana ny fitsinkombakobana mikasika ny fanaovana izay danin’ny kibo eo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Mahagaga tokoa moa fa eo amin’ izay filibalibana izay indray no mifankahazo ny saka sy ny kary.